Yaa i s-beddelka nabadda ee G/Afrika hormuud u ah ? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Yaa i s-beddelka nabadda ee G/Afrika hormuud u ah ?
Yaa i s-beddelka nabadda ee G/Afrika hormuud u ah ?
In kastoo siyasadda geeska Afrika ay noqotay mid ku salaysan is marxabbayn iyo is cafin, haddana waxaad moddaa in natiijadaas inteeda badan ay soo bilowdeen muddo yar uun ka hor qiyaastiina ah saddexdii sano ee la soo dhaafay
Saddexdan sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa inta badan hoggaamada dhowr waddan oo afrika ah qabtay oo la wereegay siyaasiyiin aan ahayn kuwii muddada soo fadhiya iyo weliba Madax aad mooddo in ay ka simanyihiin midaynta shacbiyaddooda iyo danaha Afrika.
Siyaasadda geeska afrika ayaa inta badan waxaa ka taagnaa xiisad Collaado iyo nacayb sal-dhigtay, tan oo timi kolkii waddamadaas ay soo mareen dagaallo derisnimo.
Hayaanka nabaddeed ee geeska waxaa inta badan guntiga u xidhtay madaxdii cusbayd, kuwaas oo in badan miiska keenay hishiisyo loo malaynaayay cid kasta oo ku hammidaa in ay tahay cid wakhtiga uun iska luminaysa, balse uugu dambayn waxaa meesha ka baxay collaado iyo nacayb qaan-gaadh ahaa ku waas oo ay adkayd xal u helistoodu.
Go’aankii la yaabka ahaa ayaa ahaa kii heshiiska iyo wallaaltinimada beeray ee dhex maray “Ethiopia iyo Eritrea” kuwaas oo halmar fingillada loo siibay cadaawaddii rukumaysatay ee gaadhsiisnayd heer aaysan ciidamada habeen kala qaadin, xaalladduuna ay ahayd wadnaha farta ku hay uun.
Waxa intaas wixii ka dambeeyay tusbax furmay noqday is cafintii iyo midowgii waddamada geeska iyada oo maalinba meesha laga saaraayo dhibic kasta oo nacayb ah oo soo kala dhex gasha geeska Afrika
Hurmuudka bilowga sahanka khayraysan ee qaradda waxaad mooddaa in inta badan ay haggaanka hayaan labada masuul ee ugu sarreeya Soomaaliya iyo Ethiopia, inta kalena ay noqdeen kuwo ku tageera dhammaan hishiisyadii maslaxaddeed ee ay soo jeediyeen Farmaajo iyo Abiy.
Aan dib is u jalleecnee bilowgii hoshiiska Ethiopia iyo Eritrea ayaa ahaa kii noqday lama filaan kaas oo hal mar sida fallaadhaha cadcedda ka muuqday Geeska Afrika ee xudduudkiisu ahaa lama galaan xabbadi ka yeedhto uun,
Dr. Abiy oo hore u ballan qaaday in uu is beddel ku sameeyo siyaasadda xidhxidhan ee waddankiisa ayaa jaanta la helay Farmaajo oo isna markaas ahaa hoggaan ku soo biiray geeska oo aad mooddo in uu beddelaayo magaci soomalida dagaalka qabatintay uun, uuna beddelaayo samaalidii nabadda hoggaanka u ahayd.
Sahankii nabadda ee farmaajo waxa uu suurto-geliyay in uu gacanta isu qabto hagoomiyaayaasha Ethiopia iyo Eritrea, waxaa xusid mudan in Abiy uu hore uugu diyaarsanaa wada hadallada nabadda taas oo uu hore u ballan-qaaday, farmaajo oo arrintan gacan ka geystay ayaa miiska maslaxadda dib uugu soo celiyay madaxweyanaha Eritrea Afwarki.
Heshiiskii gacanta la wada geliyay ayaa sababay in ay si buuxda u midoobaan waddamada geeska oo muddo loo arkaayay in ay yihiin kuwo siyaasaddoodu boqno-gooys ahayd.
Iyada oo ay jaanta isla heleen saddexda dal ee Soomaliya, Ethiopia iyo Eritrea Lagana dareemay xulafaysi xoogleh ayaa waxaa soo baxay xurguf siyasaddeed oo ka qaraxday kenya iyo soomaliya, murankeeduna uu ahaa mid salka ku haya dhul-baddeed.
Xurguftan siyasadded ayaa gaadhtay heer kenya ay dhammaan wiiqdo xidhiidhkii siyaasaddeed ee kala dhexeeyay soomaliya, heerna ay gaadhtay in ay saarto safiirkii soomaliya ee fadhiyay Nairobi una yeedhato keedii fadhiyay muqdisho.
Xisaddan oo marnama aysan dani uugu jirin hayaanka nabadda geeska ayaa noqotay mid saamayn ku yeelata safarkii geeddiga is beddelka horumarka ee ka furmay geeska.
Isu jawaabid iyo haddallo adag ee hawada la isu mariyay inta badanna aad mooddo in ay kenya gaadhtay heer aysan waxba tixgelin, ugu dambayn waxaa hawshan gacanta soo geliyay sida aynu ognahay Dr. Abiy oo horay isna miiska wada hadalka uu Farmaajo u soo fadhiisiyay Afwerki
Haddaba “Nin ku qabta yaa adna qabtaa e” Abiy waxa uu si buuxda madaxweyne Farmaajo uuga dalbaday in xidhiidhka labada waddan dib loo mideeyo, walow ay Soomaliya markasta arrintan diyaar u ahayd, meelna saartay kiiska badda oo faraha ay uuga qadday maxkamadda aduunka sidii ay hore u sheegtay iyo weliba sida ay qoreen war-sidayaasha gudaha waddanka kenya.
Waxaa guul ku dhammaaday la islana meel-dhigay xal u helista khilaafkii xidhiidh ee labada dal, tanna waxay sii xaadhtay jidkii loo hayay hayaanka geeddiga is beddelka geeska.
Hayaanka ka curtay geeska waa mid ay hormuud u yihiin Abiy iyo Farmaajo oo aad mooddo in laabduba ay gacmaha isu haystaan sidii ay waddamadooda uuga beddelilahayeen magacyada iyo weliba sidii ay iyagu ku kasbanlahaayeen magacyo ma-guurto ah, weliba waxaa macquul ah in ay abaal marinno ku mutaystaan hayaanka geeska ee ay hurmuud ka u yihiin.
Isbeddelka geesku waa mid soconaaya, malinba maalinta ka dambaysana helayaa niyad wanaag cusub.
Geeska Africa ayaa noqonaya meesha saxda ah ee laga hago qaaraddan cagaaran, Ugu yaraan Abi iyo farmaajona waxay hannaan doonnaan magacyo iyo qaddarin qiimo badan.
Adduunkani waa kii wanaagga iyo nabadda, Afrikadanina waa tii u baahnayd nabadayntan iyo is-kaashiga.
Previous articleDhageyso:-Puntland oo dowladda ka dalbaday inay kusoo wareejiyo qoondada…
Next articleWiil ruwaayad ka sameeyay musuq-maasuqa ka dhex jira HirShabelle oo la xiray
SAWIRRO: Dagaal Ka Dhan Ah Al-Shabaab Oo Looga Dhawaaqay Gobolka Hiiraan
Gudoomiyaha Maamulka Galmudug oo Eedayn Culus Usoojeediyay Puntland Iyo Xisbiyada Mucaaradka
XOG CUSUB: Shaki galay R/wasaare Kheyre iyo Wasiir Amniga oo Amar la siiyay
AKHRISO: Eng.Yarisow oo Amar siiyay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banadir…
Maamulka G/Banaadir Oo Amar Ku Bixiyay In La Xiro Hoteelada Ku Yaalla Liido
Qaar Katirsan Labada Golle ee BFS oo Kuwajahan Cadaado Iyo Xaaf oo Laga Cabsi Qabo In Weerarar Lagu Qaado
Dhageyso:Hanti Dhowraha Qaranka oo soo bandhigay baaris ay ku sameeyeen Hay’adaha Dowladda